Scholarships At Bishop's University 2020 for International Students - SHIBANDA
Home / SCHOLARSHIPS / Scholarships At Bishop's University 2020 for International Students
Scholarships At Bishop's University 2020 for International Students
Inyuvesi kaBhishobhi ihlinzeka ngeScholarship for International Student eCanada. Inyuvesi ka-Bishop yasungulwa ngonyaka we-1943 futhi isisedolobheni laseSherbrooke, esifundeni saseQuebec. I-Scholarship yase-Bishop's University ingeyabo abafundi abenze iziqu ezimbalwa nababuyayo. Lesi sikhungo sinomtapo wezincwadi osezingeni lomhlaba noprofesa abakhulu. Bona ngezansi ukuthola eminye imininingwane ngezifundo ezitholakalayo ezinikezwa eyunivesithi yaseBishop.
Ngaphansi kwalokhu kufundelwa kukhona ubuhlakani bokuncintisana kanye ne-chancellors ubuhle
Leli nani lokufunda ngama- $ 500- $ 20,000 ngonyaka wezifundo. Kwesinye isikhathi, izifundi ezincintisanayo zingavuselelwa futhi kwezinye izikhathi zingavela ekutheni ungumfundi omusha. Ukuze ufaneleke, kufanele
Qedela isicelo sakho se-inthanethi sokuvuma
Kufanele ube nemibhalo yakho esekelayo ihanjiswa ngaphambi komnqamulajuqu.
Ubuhle Besihle Sokufunda Chancellor
Lokhu kufundelwa kubalwa ngamanani angama- $ 10,000 ngonyaka. Umklomelo uvuselelwa kuze kube yiminyaka emithathu eyengeziwe. Inhloso kuphela yalesi sikole ukuvuza abafundi ngamarekhodi / ukusebenza okuvelele.
Ukuze ufaneleke le mfundaze, kufanele;
Gcina isimo sesikhathi esigcwele nokuma okuhle kwezemfundo
Yiba nokuma okuhle kwezemfundo
Khombisa isidingo sezezimali futhi ungakufanelekela ukuthola umklomelo oqondile ngokuya ngesimo sakho.
Yiba ngumfundi obuyayo. Lokhu ukusho ukuthi kumele ubhalise kwisemester ebusika edlule eyunivesithi.
Ungasifaka Kanjani isicelo Se-Bishop's University Scholarship for International Student
Chaza isidingo sakho sezimali nesimo sakho
Gcwalisa isigaba ngasinye sefomu lesicelo.
Nikeza amakhophi ubufakazi beholo lakho ngokwakho nabazali bakho. Kwabashadileyo akudingeki ubanikeze ubufakazi bemali engenayo yabazali bakho kodwa kufanele unikeze lowo oshade naye.
Thumela ifomu lakho eliku-inthanethi, bese uletha noma uthumele amadokhumenti adingekayo ngosuku lokugcina
Izicelo kufanele zithunyelwe kanye nemibhalo esekelayo.
Ngaphandle kwalezi zimfundaze, kunikezwe neminye imiklomelo kubafundi bamazwe aphesheya abandakanya
Umklomelo womndeni kaGriffin
U-Eric noCandace Innes Award
Umklomelo ka-Irene MacKay
Yonke imiklomelo enikezwe ibanga kusuka ku- $ 800- $ 8,000 ngonyaka wezifundo.
Umnqamulajuqu wesicelo ngu-Ephreli 15